Ihe ngosi Volvo Crossover XC2016 nke 90 ga - egosiputa CarPlay [Video] | Esi m mac
Volvo Crossover XC2016 nke 90 ga - egosipụta CarPlay [Video]
Kemgbe Machị 2014, Volvo Ọ na-ekwe nkwa nkwado ya maka Apple's CarpPlay n'ụgbọ ala ya. Echere ịhụ n'eziokwu a na nkwado a adịwo ogologo oge. Otú ọ dị ya akpatre-abịa na njedebe, dị ka emeputa (Volvo) nwere nkwenye na mbụ nke ya ugbo ala na-akwado usoro nke CarPlay Apple ga-abụ 2016 Volvo XC90 Crossover, nakwa na ọ ga-enwe ogwe nke 9 inch ihuenyo mmetụ na etiti console maka mfe nnweta. Ọkara nke ihuenyo anyị nwere ike ihu na vidiyo bụ maka ihe ndị ọzọ na-emekọrịta mmekọrịta site na 'Volvo Sensus Jikọọ', ebe ọkara ọkara ihuenyo ahụ ga-egosipụta CarPlay.
Enwere bọtịnụ na ntanetị nke XC90 nwere ike ịpinye nweta Siri, na onye ọkwọ ụgbọala nwere ike idegharị ozi ndị achọrọ, n'etiti ọtụtụ ihe nweta adreesị, Spotify, na ọtụtụ ndị ọzọ. Otu ihe ịchọrọ bụ na iji CarPlay, ndị nwe Volvo XC90 ga-achọ ijikọ iPhone ha ozugbo na sistemụ ahụ site na ọdụ ụgbọ mmiri àmụmà. Volvo ekwupụtala na ọ ga-akwado CarpPlay na a ikuku na-ejikọ, oge n'ọdịnihu.
Maka ndị nwe ya ugbu a nke Volvo XC90, ụgbọ ahụ nwere ike iji Apple CarPlay, ebe ha mere ka ọ dị mfe ịme oge maka ọrụ ọrụ aka, ka ha wee nwee ike ịgbakwunye ọrụ ahụ site na nwelite ngwanrọ, ma nwee ike iji ya n'enweghị nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Volvo Crossover XC2016 nke 90 ga - egosipụta CarPlay [Video]
Norbert tinyekwara dijo
N'aka nke ọzọ enwere m obi anụrịrị na XC90 abịaworị CarPlay, ebe ọ bụ ụgbọ ala masịrị m, na otu ọ bụla ọ si gbasaa, ọ dị ka ọganihu. Na ịchọrọ ka ejiri iPhone jikọọ iPhone, nke ahụ yiri ka ọ na-adabara m, enwere m olileanya na ha ga-aga ngwa ngwa na njikọ ikuku.
N’aka nke ọzọ, echere m na ederede ederede sitere na Anglo-Saxon, na ahụrụ m ụfọdụ ekwekọghị nke ọma na ntụgharị asụsụ. Biko nweere onwe gị idezi akụkụ a nke nkọwa ma ọ bụrụ na ị tụlee ya dị mkpa. Ma XC90 ga-enwe CarPlay. Na paragraf abụọ ikpeazụ ahụ bụ ntakịrị arụsị asụsụ ụtọasụsụ: mgbe akara nke mbụ gachara, enwere ike "para" na-efu? Thegbọ ala ahụ enwere ike iji Apple CarPlay? Ebee ka ha mere ka ọ dịkwuo mfe ịhọpụta oge? Echere m na ị pụtara na Volvo na-eme ka ọ dị mfe ịme oge. Ha nwere ike ịgbakwunye ọrụ ahụ "site na iji ngwanrọ ngwanrọ"? Nke ahụ wepụrụ site na ihe ahụ, n'aka.
EE, Enwere m ọtụtụ oge n'efu.
Zaghachi Norbert Addams
Na ikwu okwu ... Na paragraf nke abụọ ọ kwesịrị ịsị "nwee mmetụta" na "ịghara". Enwerem oge efu. Anya m abụghịkwa otú ọ dị na mbụ. 😀
Apple zụtara mmalite Emotient iji zụlite ngwanrọ dabere na ihu ihu